गोजीमै ट्याक्सी : ट्याक्सीमाण्डुबाट यसरी हुन्छ यात्रा सहज
काठमाडौं । इन्टरनेट र प्रविधिले फड्को मारिरहँदा हिजो असम्भव र सपनाजस्ता लाग्ने कुराहरु पनि अहिले सम्भव र सामान्य हुन थालेका छन् । मानिसका प्रत्यके काहरुलाई प्रविधिले सहज र सरल बनाइदिएको छ ।
सपिङ गर्न होस् या अरु कुनै पनि कारोबार गर्न ? विभिन्न एपहरुले त्यसलाई सजिलो गरिदिएका छन् । त्यसको उदाहरणका रुपमा अनलाइन सपिङ, इसेवा, आइएमई पे, खल्ती आदिलाई लिन सकिन्छ । तपाईंसँग एउटा स्मार्टफोन छ र आफू पनि प्रविधिमा खेल्न रमाउनहुन्छ भने धेरै काम हामी घरमै बसेर गर्नसक्ने भइसकेका छौं ।
यही मेसोमा अब हामीले ट्याक्सी खोज्दै भौंतारिइरहनु पर्ने छैन । राजधानीका जुनसुकै ठाउँबाट जुनसुकै ठाउँमा पुग्न घरमै बसेर मोबाइल एपबाटै घरकै ढोकामा ट्याक्सी बोलाउन सकिने भएको छ । हिजोमात्रै सार्वजनिक गरिएको ‘ट्याक्सीमाण्डु’ एपलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर राख्नुहोस् र जुनसुकै समयमा आफूलाई चाहिँदा त्यसको प्रयोग गरेर आफ्नो गन्तव्यलाई सहज र सरल बनाउन सकिनेछ ।
यहाँ क्लिक गरेर गुगल प्लेस्टोरबाट एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि
यहाँ क्लिक गरेर एपस्टोरबाट ट्याक्सीमाण्डु डाउनलोड गर्नुहोस् ।
यहाँ क्लिक गरी प्लेस्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।
यहाँ क्लिक गरी एपस्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।
‘फील सेफ राइड अन टाइम’ स्लोगनका साथ ल्याइएको यो एपले परम्परागत ट्याक्सी व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोग गरी सहजरुपमा ट्याक्सीचालक र यात्रुबीच पुलको काम गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो एपको शुभारम्भसँगै अब काठमाडौंका ट्याक्सीहरु आफ्नै गोजीमा बोकेर हिँड्न सकिने भएको छ ।
यो एपले ग्राहक खोज्दै भौतारिनुपर्ने ट्याक्सी चालकहरुको समस्याको सामाधान हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै यात्रुहरुले पनि ट्याक्सी खोज्न सडकमै भौतारिनुपर्ने समस्याको यसले अन्त्य गर्नेछ । यात्रुहरुले अब आफूले चाहेको स्थानबाटै ट्याक्सी बुक गर्न सक्नेछन् ।
यसकालागि ट्याक्सी चालक र यात्रुहरुका लागि छुट्टा छुट्टै एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । चालकले आफ्नो मोबाइलको गुगल प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा गएर ट्याक्सीमाण्डु ड्राइभर र यात्रुले ट्याक्सीमाण्डु प्यासेन्जर नामक एप डाउनलोड गर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै भिजिट नेपाल २०२० का लागि पनि ट्याक्सीमाण्डु एपले पूर्णरुपमा सहयोग पुग्ने सञ्चालकले बताएका छन् । उपत्यका आउने अधिकांश स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले ट्याक्सीको प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसका लागि ट्याक्सीमाण्डु भरपर्दो माध्यम बन्ने एपका सञ्चालक स्वीटी खत्रीले जानकारी दिए ।
चालक र यात्रु दुबैको सुरक्षा
यो एप सुरक्षाका दृष्टिकोणले एकदमै सम्वेदनशील रहेको छ । यो एपको प्रयोगबाट ट्याक्सीमा हुनसक्ने सम्भावित अपराधको घटनामा नियन्त्रण गर्न सकिने सञ्चालक स्वीटीको दावी छ । उनी भन्छिन्, ‘यस एपमा दर्ता हुने ट्याक्सीचालक र यात्रुहरुको नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा फोन नम्बरसहितको सम्पूर्ण अभिलेख राखिन्छ । यसले चालक वा यात्रुहरुबाट हुनसक्ने गतिविधिहरुको अनुगमन गर्न र नियन्त्रणमा लिन प्रशासनलाईसमेत सहज हुनेछ ।’
ट्याक्सी चालक र यात्रुलाई विशेष सुविधा
ट्याक्सीमाण्डु एपले आफ्नो औपचारिक घोषणासँगै ह्याम्स अस्पताल र इसेवाबीच सम्झौता पनि गरेको छ । जसले ट्याक्सी चालकलाई विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने ट्याक्सीमाण्डु एपका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन केसीले जानकारी दिए ।
प्रवन्ध निर्देशक केसीले भने, ‘हामीले चालकको सेवा सुविधाका लागि ह्याम्स अस्पताल र इसेवासँग पनि सम्झौता गरेका छौं । सम्झौताअनुसार ट्याक्सीमाण्डुमा दर्ता हुने चालकहरुले ह्याम्स अस्पतालमा उपचारमा १० प्रतिशत र औषधि खरिदमा ५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।’ केसीले थपे, ‘त्यस्तै यो एपको प्रयोग गर्ने चालक र यात्रुले इसेवाबाट पे गर्दा ५ प्रतिशत क्यासब्याक पाउनेछन् ।’
त्यस्तै एक महिनामा धेरै यात्रु बोक्ने ट्याक्सीलाई पेट्रोल हालिदिने र वर्षमा धेरै यात्रु बोक्ने ट्याक्सीको कर तिरिदिने समेत प्रबन्ध निर्देशक केसीले जानकारी दिए ।
#नेपाल भ्रमण #ट्याक्सीमाण्डु #प्रविधि
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले ल्यायो नयाँ अफर
नेपाल टेलिकमको डाटा प्याकेजमा नयाँ अफर
असोज ३०, २०७६ बिहिबार दैनिक अनलाइन
अन्तरिक्षमा भेटियो वैज्ञानिकलाई चकित पार्ने बस्तु
कात्तिक २९, २०७६ शुक्रबार एजेन्सी
फेसबुकमा नयाँ नियम
पुस १२, २०७६ शनिबार दैनिक अनलाइन
के हो युएसबी कन्डम ?
मंसिर १९, २०७६ बिहिबार एजेन्सी
ठूलो सफलताः दोस्रो पृथ्वी पत्ता लगाएको नासाको दाबी, जहाँ पाइन्छ पानी
पुस २४, २०७६ बिहिबार दैनिक अनलाइन